Igama lomqhubi lomxholo weNkcazelo kunye neNtsapho
Kuthetha ukuthini igama lomgcini wegama elidlulileyo?
Isibongo sesiFrentshi I-Chevalier ithetha i-knight, okanye ngaphezulu i-horseman, ukusuka kwi-Old French chevalier , elithetha "umkhosi wehashe, isolded ephakamileyo." I-Old French chevalier ivela kwiLate Latin caballarius , elivela kwigama elithi caballus , elithetha "ihashe." Ngokutsho kwegama elithi "Inkcazelo yamaNdiya eNtsapho yaseMelika" nguPatrick Hanks, mhlawumbi ukuba igama le-Chevalier "laliyi-nickname, okanye igama elisemsebenzini, kumntu weengxowa, kunokuba ligama legama," njengokuba iinqwelo zeentlanzi zazingabantwana ogama lakhe lingumntu ovela kwi-estate yabo, kunokuba umsebenzi wabo okanye isimo.
I-Chevalier idla ngokuba ngumnxeba waseFransi uHuguenot.
Igama elinguNgcaciso : I- CHEVALER, CHIVALER
Abantu abaPhezulu abanegama elibizwa ngokuba ngu-CHEVALIER
U-Auguste Chevalier - i-botanist yesiFrentshi
Ulysse Chavalier - umbhali-mlando waseFransi kunye nomabhali weencwadi
UMichel Chevalier - unjiniyela waseFransi
UMaurice Chevalier - Umdlali weFrentshi, umculi we-cabaret kunye no-entertainer
UNicolas Chevalier - umculi waseRussia owazalwa osebenza e-Australia naseNew Zealand
UCharles Louis Chevalier - umlenze wezilwanyana waseFransi kunye nomenzi wezinto
Uphi igama lomninzi we-CHEVALIER?
Ngokubhengezwa kwebheno ukusuka kwi-Forebears, isibongo seChevalier siqhelekileyo eFransi, apho sikwi-45 yeyona nkcukacha ngokuqhelekileyo kwilizwe. I-Chevalier nayo ifana neHaiti (292nd), iDipican Republic (427th), neBelgium (523rd).
Iimpawu zamagama ezivela kwiiWorldNames PublicProfiler ubonisa ukuba isername seChevalier iqhelekileyo kwiFransi, kodwa ngokukodwa kumntla-ntshona yelizwe.
Amanani amaninzi abantu abathiwa yiChevalier afumaneka kwilizwe lase-Pays-de-la-Loire, elandelwa yiBourgogne, ePoitou-Charentes, eBretagne naseHaut-Normandie. Ngaphandle kweFransi, igama lokugqibela likaChevalier liqhelekileyo eCanada, ngakumbi kwiQuebec.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name I-CHEVALIER
Ngaba igama lakho lokugqibela linemvelaphi eFransi?
Funda malunga nemvelaphi eyahlukeneyo yegama lesiFrentshi kwaye uhlolisise intsingiselo yamanye amagama aqhelekileyo aseFransi amagama.
I-Chevalier Family Crest - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjenge-Chevalier family crest okanye ingubo yeengalo kwiSenisi yeChevalier. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
I-CHEVALIER Forum of Genealogy Forum
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba we-Chevalier isibongo ukuze ufumane abanye abanokuphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho weClement.
Uhlobo lweentsapho -I-CHEVALIER Genealogy
Hlola iziphumo ezingaphezulu kwe-100,000 ukusuka kwiirekhodi zomlando kunye neefowuni ezinxulumene nomgca ezinxulumene nomgca ezinxulumene nefayile yeClement kule webhusayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
DistantCousin.com - I-CHEVALIER Genealogy & History Family
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lomgcini wegama lokugqibela.
I-GeneaNet - Iirekhodi zamaKhovali
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomnxeba we-Chevalier, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
Umzuzwana wobuGogo kunye neNtsapho Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neengcombolo kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama le-Chevalier kwi-website ye-Genealogy Today.
Izikolo eziShishini ezilungileyo kunye neeNkqubo ze-MBA zonyaka
Uloyiko olukrakra i-Halloween Memes kunye neeCononons